Ny famahana ny taom-baovao tsara indrindra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Ny vahaolana tsara indrindra amin'ny Taombaovao
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe zava-dehibe amin’Andriamanitra ve ny taom-baovao? Andriamanitra dia ao anatin'ny tsy fetezana izay antsoina hoe mandrakizay. Rehefa namorona ny olombelona Izy, dia nataony tao anatin’ny rafitra ara-nofo izay mizara ho andro, herinandro, volana ary taona. Misy kalandrie maro samihafa ampiasain’ny olona eto an-tany. Ny taom-baovao jiosy dia tsy nankalazaina tamin'ny andro iray tamin'ny taom-baovao, fa misy fitsipika mitovy. Na inona na inona kalandrie ampiasainao, ny Taom-baovao dia ny andro voalohany amin'ny volana voalohany amin'ny taom-pianarana. Zava-dehibe amin’Andriamanitra ny fotoana. Naverin’ny Salamo ny vavak’i Mosesy, izay nivavahany mba hahazo fahendrena eo amin’ny fiatrehana ny fotoana: “Fitopolo taona ny andron’ny taonanay, ary valo-polo taona ny andronay, ary valo-polo taona ny androny, ary fiezahana sy zava-poana ny fireharehany, fa faingana izany. ary mandehana any izahay. Koa ampianaro hanisa ny andronay izahay mba hanana fo hendry! ( Salamo 90,10:12 sy ).
Ny zavatra iray ampianarin'ny Baiboly momba ny natioran'Andriamanitra dia ny fametrahany ny hafainganana sy ny fanaovany zavatra amin'ny fotoana mahamety azy. Raha misy zavatra heverina hitranga amin'ny andro voalohany na roa-polo amin'ny volana, dia hitranga amin'izany andro izany, hatramin'ny ora, na hatramin'ny iray minitra aza. Tsy tongatonga ho azy na vonjy maika, fa fandaharan'Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy dia nomanina hatramin'ny antsipiriany kely indrindra amin'ny resaka ora sy toerana. Na dia talohan'ny nahaterahan'i Jesosy aza dia efa nomanina ny drafitra ary niainan'i Jesosy izany. Iray amin'ireo zavatra manaporofo ny toetran'Andriamanitra Jesosy. Tsy misy afaka maminavina hoe hanao ahoana ny fiainany, toa an'i Jesosy sy ireo mpaminany talohany. Ny fahaterahan'i Jesosy sy ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia efa nambaran'ny mpaminany taona maro talohan'ny nitrangan'izany. Andriamanitra dia nanao sy nilaza zavatra maro tamin'ny Andron'ny Taom-baovao jiosy. Ireto misy ohatra telo avy amin'ny tantaran'ny Baiboly.
Fiaran'ny sambon'i Noa
Rehefa tao anatin’ny sambofiara i Noa nandritra ny tondra-drano, dia lasa ny volana maromaro talohan’ny nihena ny rano. Tamin’ny Andron’ny Taom-baovao no nanokatra ny varavarankely i Noa ary nahita ny rano nilentika. Nijanona roa volana tao anaty sambofiara i Noa, angamba noho izy efa zatra ny fampiononana sy ny fiarovana natolony azy. Niteny tamin’i Noa Andriamanitra ka nanao hoe: “Mivoaha amin’ny sambofiara ianao sy ny vadinao sy ny zanakao ary ny vadin’ny zanakao miaraka aminao”. (1. Mosesy 8,16).
Nangataka an’i Noa hiala tao amin’ny sambofiara Andriamanitra, rehefa maina tanteraka ny tany. Indraindray isika dia feno olana eo amin'ny fiainantsika. Indraindray isika dia voafandrika ao anatin'izy ireo ary mahazo aina loatra ny misaraka. Matahotra ny handao azy ireo izahay. Na inona na inona faritra mampionona anao, amin'ny Taom-baovao 2021 Andriamanitra dia milaza aminao ny teny mitovy amin'ny nolazainy tamin'i Noa: Mivoaha! Misy tontolo vaovao any ary miandry anao izany. Ny tondra-drano tamin'ny taon-dasa dia mety nanondraka, na nandondona, na nanohitra anao, fa amin'ny Taom-baovao dia hafatr'Andriamanitra ho anao ny hanomboka indray ary hahavokatra. Voalaza fa ny zaza may dia saro-kenatra amin'ny afo, saingy tsy tokony hatahotra izany ianao. Miantomboka ny taona vaovao, koa mivoaha - nilentika ny rano nanafotra anao.
Ny fananganana ny tempoly
Nandidy an’i Mosesy Andriamanitra mba hanorina tempoly miendrika tranolay. Izany dia maneho ny toerana nipetrahan’Andriamanitra niaraka tamin’ny olona. Rehefa voaomana ny fitaovana, dia hoy Andriamanitra tamin’i Mosesy: “Amin’ny andro voalohany amin’ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakelin’ny tabernakely.” (2. Mosesy 40,2). Asa manokana izay natokana ho an'ny andro manokana - Andron'ny Taom-baovao ny fanamboarana ny trano bongo pensilihazo. Taona maro tatỳ aoriana, dia nanorina tempoly tamin’ny fitaovana mafy tao Jerosalema i Solomona Mpanjaka. Nozimbazimbaina sy nampijalian’ny olona io tempoly io tatỳ aoriana. Nanapa-kevitra i Hezekia Mpanjaka fa nisy zavatra tsy maintsy niova. Ny mpisorona niditra tao amin’ny fitoerana masin’ny tempoly ka nanomboka nanadio azy tamin’ny taom-baovao: “Fa ny mpisorona kosa niditra tao amin’ny tranon’i Jehovah mba hanadio azy ka napetrany tao amin’ny efitra izay tsy madio rehetra izay hita tao amin’ny tempolin’i Jehovah. dia nalain'ny Levita izany ka nentiny nankany amin'ny ony Kidrona. Fa tamin'ny fanamasinana no nanombohany tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany, ary tamin'ny andro fahavalon'ny volana dia niditra tao amin'ny lavarangana fidirana ho an'i Jehovah izy ka nanamasina ny tranon'i Jehovah nandritra ny havaloana, ary tamin'ny andro fahenina ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany dia vitany ny fanompoana. asa »(2. Chr 29,16- iray).
Inona no dikan’izany ho antsika? Ao amin’ny Testamenta Vaovao, i Paoly dia miresaka momba ny maha-tempolin’Andriamanitra antsika: “Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin’Andriamanitra, dia mba horavan’Andriamanitra kosa izy, satria masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany.”1. Korintiana 3,16)
Raha mbola tsy mino an Andriamanitra ianao dia manasa anao Andriamanitra hijoro ho tonga tempoliny ary ho avy sy honina ao aminao Izy. Raha efa mino an'Andriamanitra ianao, dia mitovy amin'ny nomeny an'ireo Levita an'arivony taona lasa izay ny hafany: manadio ny tempoly amin'ny Taom-baovao. Raha naloto ianao tamin'ny fahalotoana ara-nofo, filan-dratsy, fankahalana, fifandirana, fialonana, fipoahan'ny fahatezerana, fitiavan-tena, fifanolanana, fialonana, fahamamoana ary fahotana hafa, Andriamanitra dia manasa anao mba hadio avy Aminy ary hanomboka amin'ny andro vaovao. Efa nanomboka ve ianao? Mety ho ny famahana ny taom-baovao tsara indrindra amin'ny fiainanao ny ho lasa tempolin'Andriamanitra.
Mialà amin'i Babylona!
Misy zavatra niainan’ny Taom-baovao hafa voarakitra ao amin’ny boky Ezra. I Ezra dia Jiosy izay niara-nipetraka tamin’ny Jiosy maro hafa tany Babylona, ​​satria noravan’ny Babylonianina i Jerosalema sy ny Tempoly. Rehefa avy naorina indray i Jerosalema sy ny tempoly, dia nanapa-kevitra ny hiverina tany Jerosalema i Ezra mpanora-dalàna. Te hampianatra ny olona amin’ny fomba feno izay ao amin’ny soratra masina izy. Te-hanao toy izany koa izahay ka hilaza aminareo hoe: Ankehitriny isika dia tempolin’Andriamanitra ara-panahin’Andriamanitra sy ny fiangonany. Koa ny tempoly dia tandindona ho antsika mpino ary Jerosalema no tandindona ho an’ny fiangonana. "Fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany dia nikasa hiakatra avy tany Babylona izy, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy dia tonga tany Jerosalema izy, satria ny tànan'Andriamaniny no tao aminy." (Ezra [esspace]]7,9).
Nanapa-kevitra ny handao an'i Babylona izy amin'ny andro vaovao. Amin'ity Taom-baovao ity dia azonao atao ihany koa ny misafidy ny hiverina any am-piangonana (solontenan'i Jerosalema). Mety ho tafiditry ny fomba fiainanao, ny asanao, ny tsy fanao ianao any Babylona. Misy ny mpino izay mbola ao amin'ny lafiny ara-panahy any Babylona, ​​na dia mahavita asa maika aza avy any Jerosalema, ny fiangonana. Toa an'i Esra, azonao atao izao ny misafidy ny hanao ny dianao mody - any am-piangonana. Miandry anao ny fiangonanao. Mety ho dia sarotra tokoa io, indrindra ireo dingana voalohany mankany an-trano. Fantatrao, ny dia lavitra dia manomboka amin'ny dingana voalohany amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany. Efatra volana no tonga vao tonga i Esra. Manana ny fotoana hanombohana anio ianao.
Manantena aho fa hiverina hijery ny alin'ny Taom-baovao ianao ary hiteny hoe: «Faly aho fa, toa an'i Noa, dia nivoaka avy tao amin'ny faritra nampiononan'ny sambo fiara, ho any amin'ny tontolo vaovao izay namboarin'Andriamanitra ho azy. Tahaka an'i Moizy, izay nanangana ny lay tamin'ny Andron'ny Taom-baovao, na toa an'i Ezra, izay nanapa-kevitra ny hamela azy any Babylona hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra! " Mirary taona tsara ho anao aho!